Ny Lenovo Tab 4 dia hanavao ny Android 8.1 Oreo amin'ny volana novambra | Androidsis
Ny Lenovo Tab 4 dia tsy hanana Android 8.1 Oreo hatramin'ny faran'ny taona
Eder Ferreño | | Lenovo, Android Version
Ny fanavaozana ny Android 8.1 Oreo dia mivoatra miadana tokoa amin'ny ankapobeny. Tsy eo amin'ny tsenan'ny smartphone ihany, satria ny tablety koa dia mandroso miadana tokoa amin'ity tranga ity. Ohatra tsara amin'izany ny Lenovo Tab 4, izay mbola tsy manana ny fanavaozana. Saingy mila miandry ela kokoa ny mpampiasa vao mahazo azy.
Satria efa voamarina izany Ireo Lenovo Tab 4 ireo dia tsy maintsy miandry hatramin'ny faran'ity taona ity raha te handray ity fanavaozana ity amin'ny Android 8.1 Oreo. Farafaharatsiny voamarina fa handray ny fanavaozana izy ireo. Izay farafaharatsiny dia fanamaivanana ho an'ireo mpampiasa mampiasa azy ireo.
Nanamafy ny orinasa sinoa fa efa manamboatra ireo fanavaozana ireo izy ireo. Saingy mbola haharitra volana vitsivitsy vao hahatratra ny fitaovana ofisialy. Ho fanampin'izay, tao amin'ilay hafatra nozarain'ny orinasa dia nisy pitsopitsony nahasarika ny sain'ny olona.
Satria manamafy i Lenovo fa ny Lenovo Tab4 8, Lenovo Tab4 8 Plus, ary Lenovo Tab4 10 dia havaozina amin'ny Android 8.1 Oreo. Saingy tsy misy iray amin'ireo takelaka ao amin'ity fianakaviana ity ity lisitra ity. Mba ho voafaritra kokoa, tsy misy na inona na inona voalaza momba ny Tab4 10 Plus. Izay nanangana fanairana.
Satria toa izany ity maodely ity dia tsy ho afaka hanavao ny Android 8.1 Oreo toy ireo modely telo hafa izay ho vitan'izy ireo. Ny antony tsy nampidirana an'ity takelaka ity tao anaty lisitra dia tsy fantatra. Saingy mahagaga ihany raha tsy hajanona ny iray amin'ireo efatra.
Andrasana ny fahatongavan'ny vaovao amin'ny Novambra. Na dia io aza ny daty nomen'ny marika Sinoa, saingy mety hisy ny fahatarana amin'izany. Toa izany no fanavaozana ny rafitra fiasa farany hananan'ity takelaka takelaka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Ny Lenovo Tab 4 dia tsy hanana Android 8.1 Oreo hatramin'ny faran'ny taona
Ny Nokia X6 miloko manga dia manomboka ao Shina